‘डिग्रीधारी मुर्खहरु र खुइलिएको बौद्धिकता’ बारे बरिष्ठ पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेको यस्तो छ कुरो! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ‘डिग्रीधारी मुर्खहरु र खुइलिएको बौद्धिकता’ बारे बरिष्ठ पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेको यस्तो छ कुरो! (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 8, 2021 भिडियो, विचार 0
एजेन्सी । मान्छेहरू अज्ञानी भएर जन्मन्छन् तर कुनै पनि मूर्ख जन्मदैनन् तर शिक्षाले मानिसलाइ मूर्ख बनाइदिन्छ। यो भनाइ कसैले वा साधारण मान्छेले भनेको भए गाली गर्न सकिन्थ्यो तर यो भनाइ साहित्यमा नोवेल पुरस्कार पाउनु भएका साहित्यकार तथा बहुआयामिक ब्यक्तित्व Bertrand Russell को हाे ।
दिशा निर्देश कार्यक्रमका सञ्जालक बरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक बिजयकुमार पाण्डेले दिशानिर्देश टिभीको यूट्यूव च्यानल मार्फत एक कार्यक्रम मार्फत जीवनमा शिक्षा जरूरी हुन्छ तर शिक्षा नै जीवन होइन भन्दै मिडियासँगको कार्यक्रममा पत्रकारिता जगत र बाैद्धिकहरूकाे जगतहरूका बारेमा लागेकाे केहि कुराहरू प्रसारण गर्नु भएकाे छ ।
पाण्डेले आलोचनात्मक जगतमा यतिबेला बाैद्धिक सर्कलका मानिसहरू नै अति नै हावी हुदै गैरहेकाे र यस्तो आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरूले सधै आलोचना भिरेर बसेको देखिन्छ । असली बाैद्धिक सर्कलका मानिसले पत्रकारहरूलाइ बन्दी बनाइरहेकाे कुरा समेत खुलाउनु भएको छ । उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ छापामा लेख्दैमा बाैद्धिक हुदैनन् र लेख्दै नलेख्ने वा कम लेख्ने पनि बाैद्धिक हुन सक्छन् ।
यसै क्रममा पत्रकार तथा बाैद्धिक कहलिएका मानिसहरूका बारे यसरी ब्याख्या गरेका छन् कि बाैद्धिकता र यसको सम्बन्ध डिग्री वा डाक्टरसँग जोडिएर हेर्नु हुदैन । सबै डिग्री बाैद्धिक हुदैनन् । यसको अर्थ पत्रकारहरूको लाहछापको रूपमा बाैद्धिकता कुदिए भने यसको परिणाम भिन्न् हुन्छ । यस्तै हरू गहन बिषयान्तर रहेर पाण्डले गर्नुभएको कुराहरू भिडियोमै हेर्नुहोला ।
जनताले नि षेधाज्ञा उ ल्लंघन गर्न सुरु गरे, काठमाडौंका सडकमा सवारी जाम’
काठमाडौमा एकाविहानै डरलाग्दो घटना, कुकुर सहित प्रहरी अनुसन्धानका लागि परिचालित
मेयर सा’व! महिलालाइ गाली गर्दा तपाइकि आमा, श्रीमति, छोरी वा बहिनीकाे याद आएन?